Alpha 24 ya0 AD yakatoburitswa uye ndidzo shanduko dzakakosha kwazvo | Linux Vakapindwa muropa
Mushure memakore angangoita matatu, iyo Vagadziri vemutambo wakakurumbira 0 AD vakafumura iyo makumi maviri nemana alpha kuburitswa uye mukuburitswa kutsva uku kuvandudzwa kwakasiyana kunoratidzwa Izvo izvo izvo zvakagamuchirwa neinopa injini zvinomira, pamwe neezve ma mods uye nezvimwe.
Injini yemutambo 0 AD ine zviuru zana nemakumi mashanu emitsetse yekodhi muC ++, OpenGL inoshandiswa kuratidza mifananidzo ye150D, OpenAL inoshandiswa kushanda nezwi, uye ENet inoshandiswa kuronga mutambo wenetiweki. Mamwe akavhurwa sosi mapurojekiti ekugadzira marongero munguva chaiyo ndeaya: Glest, ORTS, Warzone 3 uye Chitubu.
Makuru matsva maficha e0 AD Alpha 24
Tichifunga nezve chiitiko chevamwe vatambi vane mukurumbira, Yakagadzirisa parameter yemayuniti ese uye zvivakwa zvemutambo wakaenzana uye wakasviba. Semuenzaniso, magamba anogona kudzidziswa kamwe chete, uye matanga akawedzerwa kudzidzisa vatasvi vemabhiza nengoro, uye arsenal yekuvaka injini dzekukomba dzese budiriro.
Pamusoro pezvo, maturusi matsva akapihwa ekuisa mayuniti muchimiro chemauto chekutenderera nekufora, uye rutsigiro rwakawedzerwawo nekunyungudutsa fomati painorwisa.
Kune vagadziri ve mod, iko kugona kubatanidza mamiriro emamiriro kune zvikamu zvekuchinja hunhu kwaitwa.
Kune rimwe divi, mamodheru ezvinhu zvakawanda zvemutambo zvakawedzerwa uye zvakagadzirwazve, mhando nyowani dzeheti, mabhiza, zvombo nenhovo zvakawedzerwa, zvigadzirwa zvitsva zvaitwa, kurwisa kutsva nemifananidzo yekudzivirira yakaunzwa, mavara maRoma, maGaul, maBritish nemaGreek akavandudzwa.
Tsigiro yeWindows XP, Windows Vista, uye macOS isati yasvika vhezheni 10.12 yabviswa. Iyo processor ine SSE2 yekurairirwa rutsigiro yave kudiwa kuti ishande.
Iyo yekupa injini ine anti-aliasing rutsigiro. Zvichienderana nehunyanzvi hweiyo GPU, pane sarudzo pakati peFXAA uye akasiyana mazinga eMSAA uye iyo CAS (Contrast Adaptive Sharpening) firita yakawedzerwawo kunjini yekupa.
Inosanganisira mamapu matsva manomwe.
Nyorazve iwo marongero emitambo.
Wakawedzera masisitimu evagari kudzikisira huwandu hwakanyanya hweyuniti yemutambi uye nekugovera zvikamu zveanokundwa pakati pevatambi vasara.
Iko kugona kutamba password-yakachengetedzwa mitambo yemambure yakawedzerwa kuLobby.
Yakawedzera Mepu Bhurawuza kusarudza uye kufamba mepu dziripo.
Yakawedzera interface yekumisikidza hotkeys.
Wakawedzera kugona kuputsa zvivakwa, zvichikubvumidza iwe kusimbisa zvivakwa padhuze nepadhuze.
Iyo "Hearse Overview" skrini yakawedzerwa kune iyo "Game Tutorials" menyu yekudzidza hunhu hwezvisaririra zvemagamba akafa.
Iyo yakaoma yekudzidza interface yakawedzerwa kune iyo AI injini.
Chekupedzisira, kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo kana kuwana iyi nyowani vhezheni, unogona tarisa chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Alpha 24 ya0 AD yakatoburitswa uye ndidzo shanduko dzakakosha kwazvo